दसैंमा किन रामलीला प्रदर्शन गरिन्छ? – Khabar Silo
गुलरिया दसैंको अवसर पारेर बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा रामायणको चरित्रमा आधारित रामलीला प्रर्दशनी सुरु गरिएको छ । युवापुस्तामा सनातन धार्मिक परम्पराको बोध गराउँदै धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न रामलीला प्रर्दशन गरिएको हो ।
गुलरियास्थित बसपार्क नजिकै रहेको आँपबगैचामा नवरात्रभर रामलीला प्रर्दशन सुरु भएको रामलीला मूल समारोह समितिका अध्यक्ष मनोज यादवले बताए। गुलरिया नगरपालिका, स्थानीय व्यवसायी, उद्योग बाणिज्य संघ, नागरिकको सहयोगमा रामलीला आयोजना गरिएको हो ।
घटस्थापनादेखि ९ दिनसम्म रामको चरित्रमा आधारित रामलीला विजयादशमीको दिन रावणको बध गर्दै समापन हुन्छ । रामलीला प्रर्दशनका लागि भारतको अयोध्याबाट कलाकार झिकाइएको छ ।
समग्र कार्यक्रमका लागि करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजको अनुमान छ। बेलुकी ७ बजेदेखि प्रर्दशन सुरु गरिने रामलीला करिब ५ घण्टासम्म प्रर्दशन हुन्छ । दसैंका अवसरमा आयोजित रामायण कथामा आधारित धार्मिक नाट्य चरित्रलाई तराईमा महत्वका साथ लिने गरिन्छ।
नायिका बेनिशा हमाल अहिले निर्माता रौनिक विक्रम कँडेलको प्रेममा छिन् । रौनकसँगको प्रेमका कारण उनलाई फेरि एकपटक मिडियामा चर्चा त मिलिरहेको छ । चलचित्रको पर्दामा केही समयदेखि नदेखिएकी बेनिशाले नयाँ चलचित्र साइन त गरेकी छिन् तर त्यसको छायांकन सुरु हुन सकेको छैन । बेनिशा आफैले पनि कम चलचित्र गर्ने बताउँछिन् । उनै, बेनिशाको सामाजिक संजाल […]
१. ऐश्वर्याले आफ्नो जीवनमा पहिलो विज्ञापन केमिल ब्राण्डस्को लागि गरेकी थिइन् । र त्यतिवेला उनी ९ कक्षामा पढ्थिन् ।२. आजसम्म चुनिएका सबै मिस वल्डर्समा भोटिङको आधारमा ऐश्वर्यालाई २ पटक २००० र २०१० मा सबैभन्दा सुन्दर युवती घोषणा गरिएको थियो । ३. सन् १९९४ मा जब ऐश्वर्या मिस वल्र्डको अवार्ड जित्न सफल भइन् तब उनले इवेन्टको […]